Snow na Sahara maka oge mbụ n'ime afọ 39 | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - Zinnedine nwere
Dị ka ọ dị, mgbe anyị na-ekwu maka snow anyị na-ezo aka na ebe ndị dị ka okporo osisi ma ọ bụ, na-enweghị ịga n'ihu, na mpaghara dị elu nke mpaghara Iberian Peninsula. Ma, ọ bụrụ na ọ bụrịị ihe ijuanya nye anyị iche na n'otu ebe dịka Oke Osimiri Mediterenian na ha nwere ike ịpụta na ala ọcha, anaghị m agwa gị ihe mmadụ nwere ike iche ma ọ bụrụ na nke ahụ mere na Ọzara Sahara.
Nakwa. Mgbe ụfọdụ anyị na-echefu na ihe anyị na-apụghị ichetụ n'echiche pụkwara ịbụ eziokwu. Oge a, ndị nwere obi ụtọ abụwo ndị bi na ya Aha Sefra, bụ obodo nke Algeria nke hụworo otú ọcha ọcha si kpuchie ájá nke ọzara.
Foto - NASA Worldview
Datebọchị ahụ bụ Sọnde, Jenụwarị 7, 2018. Ndị ọrụ ihu igwe na Algeria nyere ntuziaka maka snow maka ngwụsị izu ahụ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mba ahụ, anya nke doro anya na ọ ga-abụrịrị na ọ dọtara ọtụtụ ndị niile nọ ebe ahụ, ọ bụghị n'efu, ọ bụghị ebe ọ na-adaba na snow. Otú ọ dị, Camebọchị ụka ruru na obodo Ain Sefra, nke dị ihe dị ka otu puku mita n’elu elu osimiri ma nwee nkezi okpomọkụ nke January nke 12,4 Celsius.
Ọ dịghị mmiri ozuzo na-ezo ebe ahụ: na-enwe mmiri ozuzo kwa afọ nke 169mm nke mmiri kwa square mita, ọ dị obere na snow na-ada. Mana foto ndị ahụ, nke Zinnadine Hashas, ​​onye na-ese foto mpaghara ahụ mere, enweghị ohere inwe obi abụọ.
Centimita 10 ruo 15 snow dara ekele nke ikuku na-efe ikuku oyi nke sitere n'Oké Osimiri Mediterenian. Nke a emebeghị kemgbe ọnwa Febụwarị 1979, ya mere, ọ bụ afọ iri atọ na itoolu kemgbe ha riri ọ enjoyụ n'otu n'ime ọzara kachasị mma snow kpuchiri ụwa.
Kedu ihe ị chere banyere foto ndị a? O doro anya na ọ ga-abụrịrị na oge ahụ tọrọ ha ụtọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Snow na Sahara maka oge mbụ n'ime afọ 39